DHAGEYSO: Dowladda Somalia, oo ka hadashay arrinta Qalbi Dhagax | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO: Dowladda Somalia, oo ka hadashay arrinta Qalbi Dhagax
DHAGEYSO: Dowladda Somalia, oo ka hadashay arrinta Qalbi Dhagax
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kooban waxa ay uga hadashay arrinta ku saabsan Sarkaalka ka tirsan ONLF ee la sheegay in lagu wareejiyay Dowladda Itoobiya, laguna magacaabo C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax).
Taliyaha Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya C/laahi Maxamed Cali (Sambaloolshe) ayaa sheegay arrinta Qalbi Dhagax in ay tahay mid xasaasi ah, ayna haboon tahay in waqtigeeda looga jawaabo.
C/laahi Maxamed Cali (Sambaloolshe) ayaa hadalkan ka sheegay kulan xalay su’aalo lagu weydiinayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka tirsan Wasiiradiisa, kaasi oo loogu magac daray kulanka Xukuumadda iyo Saxaafadda.
War qoraal ah oo shalay ka soo baxay Jabhada ONLF ee ka dagaalanta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay Itoobiya gacanta u gelisay C/kariin Qalbi Dhagax.
Ciidamada maamulka Galmudug ayaa 23-kii bishan waxa ay howlgal ku soo qabteen C/kariin (Qalbi Dhagax), kadibna Ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxa ay keeneen magaalada Muqdisho, arrintaasi waxaa ka carooratay Galmudug.